Shiinaha Laabi karo Classic ragga muraayadaha indhaha 20144 warshad iyo alaab-qeybiye | Yinfeng
Kala-goysyadu waa la laalaabi karaa si fudud loogu qaado muraayadaha caadiga ah, jeeb kasta oo yar ayaa loo isticmaali karaa in lagu kaydiyo qaabka.
Shayga No. 20144
Ookiyaalaha qorraxdu waa nooc ka mid ah alaabada daryeelka aragga si looga hortago kicinta xoogga leh ee iftiinka qorraxdu inay waxyeello u geystaan ​​indhaha. Iyadoo horumarinta joogtada ah ee heerka walxaha dadka, muraayadaha muraayadaha ayaa hadda loo isticmaali karaa qalab gaar ah oo loogu talagalay quruxda ama qaabka shakhsi ahaaneed. Sidaa darteed, shaqadeedu kuma eka inay xannibto iftiinka qorraxda.
Muraayadaha muraayadaha laalaabi karo ayaa dhinac iska dhigaya qurxinta iyo nashqadeynta dhibka badan, waxay ku habboon tahay fikradda naqshadaynta isbeddelka casriga ah ee u dhexeeya moodada iyo shaqada, waxayna fahmeen baahida dadka badan iyagoo leh dareen ur ah. Samee muraayado aad u raaxo badan oo moodada ah in la xidho.
Naqshadaynta laablaabashadu waxay fududaynaysaa qaadista waxayna yaraynaysaa booska meelaynta. Naqshadeynta muraayadaha-qeexidda sare ee xirfadlaha ah waxay soo bandhigaysaa midabada dhabta ah ee indhaha bini'aadamku arki karaan. Saaxiibada ilaaliya indhahooda waxay ku noqdaan dabeecadda.
Isku laabashada muraayadaha qorraxda, UV400, texture iftiin ultra-light ah, laalaab buuxa oo jihada ah, ma fududa in la habeeyo, iyo habsocodku waa siman yahay. Kaliya waxay qaadataa saddex tallaabo si loo shaandheeyo oo loo ilaaliyo indhaha. Wareegyada xariiqda labajibbaaran iyo wareega waxay si fiican isugu daraan dareenka moodada iyo heerka ku habboonaanta, taas oo si fiican u dhexdhexaadin karta muraayadaha wejiga ee kala duwan. Xidhashada muraayadaha qorraxda ee xagaaga waxay leedahay saameynta ugu horreysa ee ilaalinta qorraxda, taas oo ka ilaalin karta maqaarka jilicsan ee indhaha ka soo baxa qorraxda ama roobabka melanin. . Marka labaad, waxay ka hortagi kartaa laalaabyada, waxay ka fogaan kartaa sawir-qaadista iyo indho-beelka, waxayna samayn kartaa xariijimo fiican oo indhaha ah. Waxay kaloo ilaalin kartaa kubbadaha indhaha.
Hore: Ookiyaalaha cidiya bariiska caadiga ah ragga la habeeyey
Xiga: Muraayadaha unisex ee tayada sare leh
Ragga qadiimiga ah ee muraayadaha bariiska ee nuska ah
Muraayadaha weynaynta jaban ee la habeeyey
Dhallaanka Ultralight ee muraayadaha nalka buluuga ah ee xannibaya
Weyneynta caadiga ah 1.6 jeer muraayadaha weynaynta
Muraayadaha Iftiinka Weyneeya, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn, Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Xisbiga, Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya,